Dadku hadhinto waxna hadoorto, damiir xumada dalka maanta taalla ! | ToggaHerer
← Gummaadkii Geedaha iyo Gurmadkii Ka Dambeeyay !
Saldhig Milateri – Xul Mise Waa Xal? (W/Q: C/Raxmaan Caydiid) →
Xilliga aan ka hadlayaa, waa 20kii November ee sanadkii hore oo hadda laga joogo laba bilood oo maalmo dhiman. Bal qiyaas halka uu xaal marayo maanta. Waa hubaal in xoolihii reer guuraaga aanu ka hadhin baaqi laysku hallaynkaro, waxaase werwerka ugu wayn abuuraya dhimashadii dadka oo toos u bilaabantay isla markaana tirdu ay kordhayso.